4.14.20 MCS COVID-19 Fanavaozana ara-pianakaviana – Mason City sekoly COVID-19 foibe
Mason City sekoly COVID-19 foibe
Courses ho an'ny fianakaviana
Ny Channel OHIO
4.14.20 MCS COVID-19 Fanavaozana ara-pianakaviana
COVID-19 & MCS Vaovao / By Tracey Carson
Ry fianakaviana Mason City malala,
Rehefa mandroso amin'ny fianarana ny taom-pianarana faharoa feno izahay, we want to streamline the number of communications you receive. You can depend on receiving District emails on Tuesdays and Fridays, and your Principal e-Newsletter on Sundays.
Watch ity video ity of the Mason Intermediate School, Mason Middle School and Mason High School orchestra teachers welcoming their musicians back to school with this beautiful One Bow Concerto.
Ity ambany ity ny valin'ny fanontaniana iraisan'ny fianakaviantsika sy ny vahoaka.
Ankoatry ny, here is a list of Ohio Hot Spot Locations.
Your ballot must be postmarked by 4/27 or hand-delivered to the Board of Elections dropbox by 7:30pm on April 28th, 520 Justice Dr., Libanona, NY 45036.
Ahoana no ahafahantsika manohana ny volontsika?
#CometCarryout: Fotoana iray manan-danja tokoa ho an'ny orinasantsika eto an-toerana, indrindra ireo izay mandray vahiny. Diniho ny manohana ireo orinasa eto an-toerana amin'ity lisitra ity.
Mandraisa anjara ao amin'ny Chamber's MADE mba hihinana Takeout Blitz ary jereo ny fisakafoanana any an-toerana izay azonao tohanana. Ankoatry ny, manomeza fanampiana eo amin'ny Toeran'i Joshua and choose “Comet Carryout” and you can bless a family in need with a meal from one of our local businesses.
Andao aparitaho ny toe-tsaina Mason sasany! Mpianatra manao zava-kanto amin'ny naoty rehetra, Alumni, ary ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina dia asaina hanatevin-daharana ny tarika Mason Marching Band amin'ny fitendrena ny hira miady amin'ny High School William Mason!
Satria tsy afaka miaraka manao ny zava-drehetra isika dieny izao, manasa ny rehetra hilalao ny zavamanenonay izahay (ao anatin'izany ny chords-nao!) or the recording from your porch on Friday April 17th, amin'ny 5 PM! Kopian'ny mozika, ary rakipeo, misy ao amin'ny www.masonbands.com
Makà horonantsary na sary hizarana ny fanahinao Mason eto amin'ny Pejy Facebook Event MHS Fight Song Challenge Challenge on Friday!
Jereo ny fanavaozana teo aloha.
Manamboninahitra ho an'ny daholobe
← Teo aloha Post
Manaraka Post →
4.24.20 MCS COVID-19 Fanavaozana ara-pianakaviana
4.21.20 MCS COVID-19 Fanavaozana ara-pianakaviana
4.17.20 MCS COVID-19 Fanavaozana ara-pianakaviana
4.10.20 Fampahalalana momba ny grady
COVID-19 & MCS Vaovao
Fampahalalana ankapobeny momba ny mpiasa
Fanavaozana mpiasa RLE
Fanavaozana ara-teknolojia ho an'ny mpiasa
Mandehana mankany ambony